2015 HPA Tech Retreat (r) သည်တိုးချဲ့ထားသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုပြသခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 2015 HPA Tech မှသီးသန့် (r) Expanded တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဇယားကိုထုတ်ဖော်ပြသ
ထူးမြတ်သောနည်းပညာ Event မှာ power-ထုပ်ပိုး lineup သည့် Horizon အပြင်အလေးပေး
အိန္ဒိယဝဲလ်,, CA - ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့(r) (HPA) အများအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ဇယားကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည် 2015 HPA Tech မှသီးသန့်(r), 9th မှဖေဖော်ဝါရီလ 13th, အိန္ဒိယဝဲလ်အတွက် 2015, CA. အဆိုပါ Tech မှသီးသန့်တစ်ဦးဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်သေးအင်ဂျင်နီယာ, နည်းပညာနှင့်မဟာဗျူဟာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေယနေ့မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာများလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးရန်အတွက်ထိပ်တန်းဖန်တီးမှုစွမ်းရည် join ဘယ်မှာစုဆောင်းအာရုံစူးစိုက်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်အစည်းအဝေးများ, ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ဖြစ်ရပ်များလေးခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့စီစဉ်ထားရက်ပေါင်းကမ်းလှမ်းခြင်း, အကြောင်းအရာ, created ချော, ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်၎င်း၏ပြောင်းလဲနေသောနှင့်လျင်မြန်စွာအသွင်ကူးပြောင်းမှုဆက်လက်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်တစ်ဦးမျှော်လင့်ရှုထောင့်ကယ်တင်တတ်၏။
20 နှစ်ပေါင်းအဘို့, Tech မှသီးသန့်သဲစိတ်ကူးများမွေးဖွားတဲ့ bellwether ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းပညာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့် UHD မှစ. , မိုဃ်းတိမ်နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး, ထုတ်လွှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ၏နောကြားမှာရှာဖွေစူးစမ်းစဉ်ဖန်တီးမှုရည်ရွယ်ချက်ထိန်းသိမ်းခြင်းမှ - အဲဒီအကြောင်းထင်ခံရမယ့်လျှင်, ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်း, ဖြစ်ကောင်းပင် Tech မှသီးသန့်မှာချေပလိမ့်မည်။ 45 အစည်းအဝေးများထက်ပို 75 မနက်စောစောမနက်စာစားပွဲဝိုင်းလှုံ့ဆျောနှင့် 100 စပီကာကိုကျော်ထင်ညီလာခံအစီအစဉ်ကိုဖွင့်ပါစေ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 30 နည်းပညာသစ်ဖြစ်ရပ်ရဲ့ပြတိုက်မှူး Demo ်လဲခန်းထဲမှာပွဲဦးထွက်မှစီစဉ်ထားကြသည်ကို၎င်း, အချိန်ဇယားကိုရှာဖွေရေးနှင့်အပြန်အလှန်အဘို့အချိန်ကမ်းလှမ်းရန်ထွင်းထုထားသည်။
လီယွန် Silverman သည် HPA သမ္မတကျွန်ုပ်တို့၏ 21st တစ်နှစ်ဝင်သကဲ့သို့, Tech မှသီးသန့်သင်လက်လွတ်ဖို့မတတ်နိုင်သူတွေကိုဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက် "မှတ်ချက်ချသည်။ အကြောင်းအရာများ, နည်းပညာနှင့်ထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းစိတ်ထဲတွင်၏ရောနှောဒီဖြစ်ရပ်ဟာနှစ်စဉ် check-in စက်မှုလုပ်ငန်းဂုရုနှင့်တော၌နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆိုပါ HPA မှာစုဆောင်းရန်ပုံပေါ်ကြောင်းနက်ရှိုင်းသောတွေးခေါ်ရှင်နှင့်အတူစေသည်။ အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့်ဖို့ဘုရားဖူးပြုလုပ်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏သွေးခုန်နှုန်းအပေါ်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူကိုဤမျှလောက်များစွာသောပေးပုံရသည်။ "
ပြီးပြည့်စုံသော 2015 HPA Tech မှသီးသန့်အချိန်ဇယားနှင့်စပီ '' BIOS အဘို့, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ။ အဆိုပါသီးသန့်၏သင်တန်းကာလအတွင်းတင်ပြ 45 အစည်းအဝေးများကျော်ရှိပါတယ် (နောက်ဆုံးအချိန်ဇယားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ )
အဆိုပါ 2015 HPA Tech မှသီးသန့်၏ပျေါလှငျတို့ပါဝင်သည်:
အဆိုပါ HPA Supersession - အပြောင်းအလဲတခုစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အစည်းအဝေးများ၏တစ်ဦးကအပြည့်အဝနေ့က။ ကျွန်တော်ထင်သည့်အခါရုံကျွန်တော်တို့ဟာအသစ်များကိုနှင့်အခြေခံဆိုင်းမြင်နေပါတယ် "ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်" ဟုရန်အကူးအပြောင်းကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။
Keynote - မသင့်ခမည်းတော်၏ Post ကို
ရုပ်ရှင်ရုံများ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ: နယူး Technologies ကများနှင့် Techniques: သူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများအဘို့အဓိပ်ပာယျကဘာလဲ
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် Times သတင်းစာအတွက်ကို Creative ရည်ရွယ်ချက်ထိနျးသိမျး: မိုးစ မှစ. စံချိန်စံညွှန်းမှ
အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်လူငယ်ကဏ္ဍ Update ကို
လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် immersive အသံ
DDP နှင့် IMF
အဆိုပါကို Creative Palette မြှင့်တင်ခြင်း
နီးပါး 100 အားလုံးစတားပီများထဲတွင်သည် lineup ပါဝင်သည်:
ဘီလ် Bennett က, ASC
စတီဖင် Beres, HBO
Sara-Duran အဆိုတော်, Netflix
ယောဟနျသ Fithian, ပြဇာတ်ရုံပိုင်ရှင်များအမျိုးသားအစည်းအရုံး
ဘာဘရာ Lang, SMPTE
ကာရိုလိုင်းနား Lavatelli, Trust ၏အငျတာနကျ
Pete Ludé, ရီးရဲလ်: D
Theresa Miller က Lionsgate
Loren Nielsen, Entertainment ကနည်းပညာအတိုင်ပင်ခံ
Vikram Phatak, NSS ကိုအပြီး Labs က
ဘော့ Seidel, CBS
Pizzi, NAB Skip
အန်ဒီ Shenkler, Sony က DADC မီဒီယာသစ် Solutions
လီယွန် Silverman, HPA
လာရီ Thorpe, ကို Canon
မာရီယို Vecchi, PBS
Erik Weaver, USC မှာ Entertainment ကနည်းပညာရေးစင်တာ
Silverman ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ 21st တစ်နှစ်ရဲ့ "commented, နှင့် lineup ယခင်ကထက်ပိုပြီးဖှယျနှင့်သိကောင်းစရာများဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းများကိုအတူသွား, အဖြေနှင့်အတူ Tech မှသီးသန့်မသွားနှင့်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ပါပဲ။ သငျသညျစေ့စပ်နှင့်အကြောင်းကြားခဲ့တာသော်လည်းသည်အတိုင်းသင်အမြဲသင်တို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုအတူထားခဲ့နိုင်တယ်သော်လည်း, feeling ထားခဲ့ပါ! အဲဒါကိုကကုန်သွယ်မှုပြပွဲပုံမှန်ညီလာခံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး, အရောင်းအဖြစ်အပျက်မဟုတ်ပါဘူး, ထိုသို့တစ်ကျောင်းကအဖြစ်အပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဲ့လှုံ့ဆျောထင်နှင့်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလူအပေါငျးတို့သရှိပါတယ်; သငျသညျတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူးအထူးသဖြင့်သူများ။ ကတူအခြားဘာမျှရိုးရှင်းစွာရှိပါတယ်။ "
အဆိုပါ Tech မှသီးသန့်တစ်လျှောက်လုံးနည်းပညာသစ်များအစည်းအဝေးများနှင့် Demo ်လဲခန်းထဲမှာစူးစမ်းခြင်းနှင့်သရုပ်ပြနေကြသည်။ အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်, အဆင့်မြင့်ကင်မရာတွေ, holographic ပုံရိပ်, 3D - ဤနှစ်တွင်အသစ်နည်းပညာများများစွာမိတ်ဆက်အရေးကြီးသောနည်းပညာတိုးတက်မှု၏အဖြစ်အပျက်ရဲ့သမိုင်းနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်ပထမဆုံးယခုနှစ် Christie ကအသစ်လေဆာ projection ဖြေရှင်းချက် Tech မှသီးသန့် Sessions စဉ်အတွင်းအသုံးပြုသွားမည်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့်အဘို့အမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုသည်။ အဆိုပါ Tech မှသီးသန့်ကန့်သတ်တက်ရောက်သူဖြစ်ရပ်နှင့်ထိုင်ခုံစွမ်းရည်ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ရောင်းဖို့မျှော်လင့်ထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမှတ်ပုံတင်ရန်နေဆဲဖြစ်နိုင်ပေမယ့် pre-ကွန်ဖရမှတ်ပုံတင်မှသာဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်သည့်အချိန်အပြီးတနင်္လာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2014, ပိတ်, အဲဒီမှတ်ပုံတင်အာကာသ-ခွင့်ပြုဖြစ်ကြသည်။ full-ညီလာခံအဖြစ်တစ်ရက်မှတ်ပုံတင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းညီလာခံအစည်းအဝေးများ, မနက်စာစားပွဲဝိုင်း, နေ့လည်စာ, သရုပ်ပြအခန်းတစ်ခန်းနှင့်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များပါဝင်သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့်စပွန်ဆာအခွင့်အလမ်းများပိုမိုသိရှိလိုပါက, hollywoodpostalliance.org/မှာ 213.614.0860 သို့မဟုတ်အီးမေးလ် Eileen Kramer ကိုပဌနာ [အီးမေးလျ protected]။ စာနယ်ဇင်းမှတ်ပုံတင်ဘို့, မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေးလောင်ကျွမ်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်, [အီးမေးလျ protected], 818.980.3473 ။
အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့်၏စပွန်ဆာ Aspera ပါဝင်သည်, လွန်စွာလိုလားသော, က Black Magic ဒီဇိုင်း, Christie ကဒစ်ဂျစ်တယ်, Dolby, ဖူဂျီ, Oracle က, ကွမ်တမ်, Sohonet, Sony က, SPECTRA Logic ။
အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့် (r) အကြောင်း
အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့် (r) ကိုထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များ Palm Springs ဧရိယာ၌အလွတ်သဘောစုဝေး, တစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ်မဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ၌ရှိသမျှသောရှုထောင့်ကနေ, နည်းပညာအပေါ် post ကိုထုတ်လုပ်မှုအာရုံစူးစိုက်, ရုပ်ရှင်, တီဗီ, ဗီဒီယို, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာဒေသများ, သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ဘို့။ အဆိုပါ 2015 HPA Tech မှသီးသန့်အိန္ဒိယဝဲလ်, ကယ်လီဖိုးနီးယား,9ဖို့ရာအရပျဖေဖော်ဝါရီလ 13 ယူပါလိမ့်မယ်။
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာ ရုပ်ရှင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု ရုပ်မြင်သံကြား ဗီဒီယို 2015-01-29
ယခင်: Kraft အားကစားထုတ်ကုန်များနှင့်ဆူးပင်ကိုဆက်သွယ်ရေး Professional ကအမေရိကန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၏အချိန်မီသတင်းပေးပို့မှုအတွက် Dejero အပေါ်ကိုအားကိုးပါ
နောက်တစ်ခု: SSL C10 သည် SHOPPING CHANNEL ၏ HD ထုတ်လုပ်မှုသို့အေ့ဒ်စ်ရောဂါကိုသက်သာစေသည်